UMCULO WOPROTESTANTI NGOKUHAMBA KWAMAXESHA: NGABA INGOMA INGALITSHINTSHA ILIZWE? - IPODCAST
Xa uMculo uba liPolitiki
Kunyaka woqhanqalazo lwembali, ngobusuku bonyulo olunzima, besicinga kakhulu ngendawo yomculo kwiintshukumo zotshintsho kwezentlalo nezopolitiko. Kulesi siqendu, uMhleli wePitchfork uPuja Patel uthetha noJason King, unjingalwazi e-NYU kunye nelungu lesiseko seClive Davis Institute of Music Recorded, kunye noAllison Hussey, uMlobi wabasebenzi bePitchfork, malunga nendima eguqukayo yomculo wokuqhankqalaza kwimbali yaseMelika, ukusuka Inkulungwane ye-19 yokomoya oMnyama kwiintshaba zikaRhulumente, u-Lady Gaga, noJanelle Monáe. Bachaphazela nembali eyimfihlo kaBob Dylan classic, kunye neendlela ezintsha zeenkwenkwezi ezibandakanyekayo ekusebenziseni ixesha lokuzonwabisa.
Mamela esi siqendu sale veki singezantsi, kwaye Rhuma kwi Uphengululo lwePitchfork simahla kwiiApple Podcasts, Spotify, iStitcher, okanye naphi na apho umamela khona iipodcast. Unokujonga kwakhona isicatshulwa sepodcast esibhalwe ngezantsi. Ngaphezulu, jonga amanqaku kaJason King Ubutshantliziyo, iZazisi kwezePolitiko, kunye noPop's Great Awaking , kwaye Ngaba iiPop Stars zingaBangabaququzeleli bezepolitiki?, kunye noAllison Hussey iingoma ezi-5 eziThathe ubuzwilakhe kwihlabathi liphela, kunye neeNdaba eziNgasemva kwabo.
UJason King: Ndicinga ukuba ngumzekelo wengoma yokuqhankqalaza eguqule ngokupheleleyo indlela uluntu oluhambe ngayo kwihlabathi liphela Yithi Ngokuvakalayo-Ndimnyama kwaye ndiyazingca NguJames Brown. Ngumhobe wakhe we-1968 owawuthetha ngamandla aMnyama, ukuxhotyiswa kwabaNtsundu, kunye nokuzimisela. Kumnandi njengesihogo, ikwayara yabantwana abonwabileyo becula ikwayara. Le ngoma yayixubusha ngendlela, ngaphezu kwayo nayiphi na into ngelo xesha, yanceda ukutshintsha indlela abantu abaMnyama abazicingela ngayo.
Inxalenye yesizathu soko yayikukuba igama elithi uMnyama lalinemikhwa emibi kangangexesha elide. Uninzi lwabantu, kubandakanya abantu base-Afrika nabamaMelika, babesebenzisa igama elithi Negro endaweni yoMnyama. Kwaye ke loo ngoma yanceda ukufundisa ukuzingca kuluntu oluMnyama ngexesha apho kwakukho le ntshukumo yamandla aMnyama aMnyama.
Ikhuthaze abantu abaMnyama ukuba benze olo tshintsho kwaye baqale ukuzibiza ngokuba baNtsundu endaweni yeNegro, kwaye uMnyama uya kuba yinto abanokuzingca ngayo. Oko bekungafani nenye into efuziselayo-abantu bayisebenzisile le ngoma kwaye bayifaka ebomini babo ukwenza utshintsho olukhulu. Ndicinga ukuba yinto eza kungena kwimbali yomculo woqhanqalazo njengenye yezo zihlandlo ezazinegalelo ekutshintsheni ubudlelwane bamandla.
Ukubhida kwe Patel: Ngokupheleleyo. Ngokumamela nje xa uthetha, ndicinga ngendlela umculo omninzi wokuqhankqalaza obhalwe ngokusisiseko ngabaculi abaNtsundu kwaye wenziwa ngabaculi abaMnyama ebeluhlobo lokuhlengahlengiswa kwakhona kwamagcisa athandwayo, aqhelekileyo kunye nezihlwele ezimhlophe zoluntu kunye nabaphulaphuli.
Ngaba iluncedo? Njengaye, kuvakala ngathi kuluncedo. Ngaba sineemvakalelo ezingqubanayo malunga nayo?
JK: Ewe, ngumbuzo onenkohliso ngeendlela ezithile. Ngenxa yemiceli mngeni uninzi lomculo wasemva kweminyaka yama-60s kunye nama-70s — owawufana nqwa nokucaphula ixesha legolide kumculo wokuqhankqalaza-wawubhekisa kwiimeko ezithile zezopolitiko kunye neemeko zenkcubeko ezazisenzeka ngelo xesha. Uyazi Ngubani obukele uMlindi ; njengalezo zinto zibhekisa kwi-COINTELPRO kunye neNixon kunye nabalondolozi. Ibhekisa kwizinto ezithile ezithile.
Kwaye ke xa sele isampuliwe kwaye iphinde yenziwa kwakhona kwaye yaphinda yenziwa kwakhona, kwinqanaba elinye elothusayo ngokomgangatho wokunyamezeleka kwalowo mculo kunye nendlela elawulwa ngayo. Ngamanye amaxesha ukuphindaphinda kwakhona kunengxaki enkulu. Umzekelo, xa iimveliso kunye neenkampani zisebenzisa umculo wokuqhankqalaza, nokuba sithetha ngeBeatles 'Revolution okanye nantoni na eyenye, kwaye bayawuhlambela umculo kuba bawusebenzisela injongo ebingasetyenziswanga ekuqaleni. Kwaye abanamdla kumxholo oza nawo. Ndicinga ukuba kunokuba yingxaki.
Ke ndihlala ndinomdla wokwenziwa ngokutsha komculo, ukuba iyakwazi ukwenza uhlobo lokuqinisa okanye ukungqinisisa nangayiphi na indlela ezinye zeemeko zokuqala ezazisenziwa nguloo mculo kwaye wawubhekisa phi kwasekuqaleni. Umzekelo endinokukunika yenye yeengoma zam zoqhanqalazo endizithandayo kule minyaka mihlanu okanye mithandathu idlulileyo, eyiyo Esihogweni Wena Talmbout NguJanelle Monáe kunye neqela laseWondaland. Yeyiphi ingoma engummangaliso usebenzisa iingoma zicela abaphulaphuli bale ngoma ukuba baxele ngokuthe ngqo amagama amaxhoba aMnyama okuhlukunyezwa ngamapolisa okanye obunye ubugwetywa ngurhulumente.
Kodwa ke loo ngoma ibonakala kuDavid Byrne weeNtloko zeNtetho zomculo I-Utopia yaseMelika , kwaye abantu babefana, Kutheni basebenzisa le ngoma? Ikhetheke kakhulu kuJanelle Monáe. Icacile kuloo mzuzu. Kodwa ndiyayithanda. Ndicinga ukuba kuyamangalisa kuba ucela ukuba wenze kwa into ayenzayo.
Utata john misty uphononongo olusulungekileyo lwamahlaya
Akayichaphazeli ingoma. Ubeka nje umxholo ohlukileyo wenjongo eyahlukileyo kunye nabaphulaphuli abohlukileyo. Kwaye yenza nje ukuba umculo uvumelane neqela labantu ngokubanzi.
Ngo-2017 xxl isiciko esitsha
christine kunye namakhosikazi iingoma
ityuwa n peppa iyimfuneko kakhulu
opa gangnam isitayile sevidiyo
UGeorge harrison zonke izinto mazidlule
porter i-albhamu yelizwe jikelele